Baarlamanka Oo meel-mariyey maamuska Madaxda sare ee Puntland markay xilka degaan (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 20, 2013 5:51 b 0
Garoowe, July 20 -2013 – Baarlamaanka Dowlada Puntland ayaa maanta ka dooday mooshin la xiriira maamuus Qarameed loo samaynayo madaxda ugu sar sareysa maamulka sida Madaxweynaha, Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamanka ee Puntland, marka ay xilalka ka degaan.
Mooshinka oo ay aad uga doodeen xilibaanada Baarlamanka ee Puntland ayaa ugu dambeyntii waxaa si gacanta tag ah ku ansixiyey Baarlamanka, iyadoo la ogolaaday in madaxda sare ee Puntland markay xilalka ka degaan ay helaan adeegyo dhanka amaanka ah iyo mushahaar joogta ah.
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka ee Puntland Salaad Xareed Cali ayaa ku dhawaaqay in la ansixiyey xeerkan isla markaasna ay ogolaadeen 24 mudane, wuxuuna markaas kadib sheegay in cod aqlabiyad leh lagu meel mariyey qorshaha madaxda.
Qorshaha maamus Qarameedka oo ahaa mid si weyn xilibaanadu ugu kala aragti duwanaayeen ayaa waxaa kaloo lagu ogolaaday, ?in xilibaanada Puntland ee aan dib loo soo dooran la siin doono mushahar u dhigma 12 bilood.
Halkaan ka dhegeyso war-bixin uu diyaariyey Cabdiweli Maxamed Sheikh